Qorista: Ka hel Xiriirinta Ganacsiga Google | Martech Zone
Haddii aad raadineyso xiriir ganacsi dhammaan shabakadaha bulshada, Google waa aalad aad u fiican. Badanaa waxaan sameeyaa baaritaan Magaca + Twitter, ama Magaca LinkedIn + si aad uhesho astaan LinkedIn, dabcan, wuxuu leeyahay mashiin raadin weyn oo gudaha ah (gaar ahaan nooca lacagta la siiyay) sidoo kale waxaa jira goobo sida Xogta.com si loo helo xiriiro. Badanaa maahan, waxaan adeegsadaa Google inkastoo. Waa bilaash waana sax!
QoristaEm waxaa si gaar ah loogu dhisay kuwa wax qora si ay si fudud ugu helaan musharixiinta fursadaha shaqo ee khadka tooska ah. Asal ahaan waxaa loo dhisay si otomaatig ah loo dhiso su'aalaha raadinta boolean ee adag si aad si fiican ugu raadiso Google macluumaadka aad u baahan tahay. Sidoo kale waa qalab weyn oo loogu talagalay xirfadleyda iibka kuwaas oo isku dayaya inay raadiyaan raadinta iyada oo loo marayo bogagga warbaahinta bulshada ee LinkedIn, Google+, GitHub, Xing, Stackoverflow iyo Twitter.
Interface waa cad yahay oo fudud:
Markaad geliso dhammaan macluumaadkaaga, weydiinta baaritaanka waa la dhisay:
Tags: suuqgeynta b2bhel raadinta b2b khadka tooska ahGitHubraadinta githubraadinta googlegoogle +wuxuu hogaamiyaa khadka tooska ahLinkedInraadinta ku xiranraadinta khadka tooska ahqoristaqortiinStackoverflowraadinta qulqulkaTwitterraadinta twitterXingraadinta xing